Azafady, avelao aho hiverina an-trano - Vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics amin'ny Internet
Azafady, avelao aho hiverina any an-trano
Azafady, avelao aho hiverina any an-trano Average 2.4 / 5 avy amin'ny 7
N / A, manana fomba fijery 5.9K
Gender Bender, matoatoa, Historical, Isekai, Manhwa, matotra, Medical, zava-miafina, filozofika, Shoujo, Survival, Thriller, Webtoons
Vakiana ianao Azafady, avelao aho hiverina any an-trano, mahafinaritra manhwa.
Manhwa no fiantsoana ny tantara an-tsary Koreana. Azonao atao ny mahita ny fironana webtoon dia malaza fa manhwa Koreana.
Manantena aho fa ny fizarana dia hanampy anao hahatakatra hoe inona Webtoon dia. Andao hanaraka ny tsara indrindra Webtoon, ambony Manhwa, manhua, ary manga maimaim-poana izao eto amin'ity tranonkala ity!
집으로 돌려보내 주세요 Ilay protagonista, izay tia tantaram-pitiavana, dia nanana toetra teo amin'ny tontolon'ny tantara raha vantany vao nahazo fiaiken-keloka avy amin'i Yejun, ilay olon-tiany. Ao amin'ny tantara dia nanana aristocrat lavo antsoina hoe Beatrice izy. Tsy nanana fifandraisana mahafinaritra izy, fa norahonana ny ainy. Daniel, ilay fofombadiny mampiahiahy izay manandrana mamono ny ainy tsindraindray, ary i Ellin, ilay mpitaingin-tsoavaly voaozona izay miaro azy amin'ny tenany. Nisy fihetseham-po hafahafa nanodidina azy roa lahy. “Te hody aho!” Ho afaka hiverina soa aman-tsara ve aho tsy ho faty…?
Chapter 23	Novambra 15, 2021
Chapter 21	Oktobra 26, 2021
Chapter 20	Oktobra 23, 2021
Chapter 19	Oktobra 23, 2021
Chapter 18	Oktobra 23, 2021
Chapter 17	Oktobra 23, 2021
Chapter 16	Oktobra 23, 2021
Chapter 15	Oktobra 23, 2021
Chapter 14	Oktobra 23, 2021
Chapter 13	Oktobra 23, 2021
Chapter 12	Oktobra 23, 2021
Chapter 11	Oktobra 23, 2021
Chapter 10	Oktobra 23, 2021
Chapter 9	Oktobra 23, 2021
Chapter 8 Oktobra 23, 2021
Chapter 7	Oktobra 23, 2021
Chapter 6	Oktobra 23, 2021
Chapter 5	Oktobra 23, 2021
Chapter 4	Oktobra 23, 2021
Chapter 3	Oktobra 23, 2021
Chapter 2	Oktobra 23, 2021
Chapter 1	Oktobra 23, 2021
Ao amin'ny Top of my CEO
Ilay mpandova tokana
Desambra 26, 2020
Ny fiainany dia
Desambra 7, 2020
Memorandum tamin'ny taonjato faha-19
tantara an-tsary (21)
tantara an-tsehatra (831)
Hetsika mivantana (6)
biby goavam-be (5)
Mpiasa birao (4)
Tifitra iray (10)
Ping Ping Jun (7)
Mivadika harem (1)
Ny fiainam-pianarana (148)
Sci-ny fi (30)
Shounen Ai (54)
Sarin'ny fiainana (159)
Yaoi malefaka (1)
Yuri malefaka (1)
Hery lehibe (3)
mihoatra ny natoraly (124)